Iingcebiso zokuthintela ingqumbo eBrand ngesiCwangciso sakho se-imeyile | Martech Zone
Iingcebiso zokuthintela ingqumbo eBrand ngesiCwangciso sakho se-imeyile
NgoLwesithathu, nge-16 kaJanuwari 2013 NgoLwesithathu, nge-16 kaJanuwari 2013 Douglas Karr
Kutshanje sipapashe i-infographic kwi Ukudinwa Apho abathengi bayaxhathisa ekuqhubekeni nokuqhushumiswa ngeesaveyi. Kwizithende zoku kuhlalutyo olukhulu olunikezwe ngu Umbono nge-imeyile indlela ukuqhushumbisa abathengi okunokubangela ngayo ingqumbo.
The YouGov kwaye Umbono nge-imeyile Uphando lubuze abathengi ngezimvo zabo kwimbalelwano yentengiso, kwaye lukhanyisela indlela abathengisi abangafaneleyo abayithathayo enokubangela ingqumbo yophawu. Uphononongo lufumene:
Iipesenti ezingama-75 zixele ukuba ziya kuyicekisa i-brand emva kokuhlaselwa nge-imeyile
I-71% icaphule ekufumaneni imiyalezo engacelwanga njengesizathu sokucaphuka
I-50% yaziva ifumana igama labo elingalunganga yayisisizathu sokucinga kancinci ngegama
I-40% ivakalise ukuba ukufumana isini gwenxa kuya kuba nefuthe elibi
Ngokwahlulahlula okungcono kunye nokujolisa, abathengisi banokuyiphepha le migibe, nangona kunjalo lo ngumceli mngeni xa abathengi behlala bengafuni ukunika ulwazi olusisiseko:
Kuphela yi-28% ebonakalise ukuba ingavuma ukwabelana ngegama labo
Kuphela yi-37% kuphela eya kuthi ikulungele ukwabelana ngeminyaka yabo
Yiipesenti ezingama-38% kuphela ezinokuthi zichaze isini sabo
Iingcebiso eziphambili zokwenza umkhankaso wentengiso we-imeyile
Sebenzisa itekhnoloji ukuvala umsantsa phakathi kwegama kunye nabathengi baboLonke unxibelelwano umthengi analo ngeshishini elikwi-intanethi, ukusuka ekubrawuzeni kwiwebhusayithi, ukuya evulekileyo kwaye ucofe i-imeyile, kwi-tweet, okanye ukuthengwa kwivenkile kungabanjwa ukuze kuveliswe idatha ebalulekileyo. Namhlanje kukho isizukulwane esitsha sesoftware esizinikeleyo ekuncedeni amashishini aqonde le datha ibizwa ngokuba yiNtloko yabathengi. Itekhnoloji ye-CI yenza ukuba abathengisi bakhe ukwakha ukuthengisa okujolise kubo kunye nokwenzelwe umntu okusekwe kwiiprofayili zabathengi eziqhelekileyo kunye / okanye ukuhlangana kwababhalisi kunye negama.
Yazi umthengi wakhoAbathengi ngabantu abathengisayo kunye nabathengisi abakwi-Intanethi kufuneka bakhe ubudlelwane phakathi kwabo nabantu. Ngokukhulisa imiyalezo ekujoliswe kuyo, iimveliso ezikwi-Intanethi zinethuba lokuchukumisa abathengi ngolwazi lwabo. Ngale nto uyichukumisayo, iinkampani zinokunxibelelana ngendlela efanelekileyo nenomdla.
Khuthaza umthengi wakhoAbathengi kufuneka bacengelwe ekubeni banike idatha yabo. Sebenzisa ukhuphiswano kunye nokunikezelwa kwemali yokutsala umdla wabo kuya kubanceda bazive bexabisekile ngokwabelana ngedatha yabo.
Umxholo kunye nomxholo we-imeyileYonke imnxeba yesenzo kufuneka iqinise ixabiso ekuthatheni loo nyathelo, ke yibandakanyeke, yenze uchulumanco kwaye wenze amava akho ukuba uphawu lwegama lakho lubonakale. Le fowuni yesenzo kufuneka ihanjiswe kumgca wesifundo kwaye iqiniswe kumxholo okwi-imeyile. Isebenza njengombonakalo wokuqala kwaye ukubaluleka komgca wesifundo kuya kugqiba ukuba i-imeyile iya kuvulwa okanye ihlale ilahlekile kwibhokisi engenayo.
Yenza unikezelo lwakho: Musa ukuvumela ubukrelekrele babathengi ukuba bonakalise. Ukuziphatha kwangaphambili kokuthenga kunye nolwazi abathengi abakunika lona ekuhambeni kwexesha kunokusetyenziselwa ukwenza imikhankaso ekujoliswe kuyo. Ukwenza izithembiso zakho zodwa kunokuthetha umahluko phakathi konqakrazo kunye nentengiso.
tags: inzondo yophawuumbono weimeyilenentlunguyougov
I-ROI yongeza ukuHola kwabaNtu kweNtengiso